Gudoomiyaha Galgaduud oo ka hadlay dagaalka gobolkaas ka dhacay – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha Galgaduud oo ka hadlay dagaalka gobolkaas ka dhacay
Isagoo wareysi siinayay Radio Muqdisho gudoomiyaha gobolka Galgaduud mudane Xuseen Cali Wehliye Cirfo ayaa waxaa uu ka hadlay dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay gobolkaas degaanoi dhaca xaduudka uu la wadaago dalka Ethiopia waxaana uu gudoomiyuhu ku baaqay nabad.
Mr Cirfo ayaa sheegay in dagaaladaas lagu dilay ilaa 52 ruux oo isugu jiray rag iyo haween, halka tuulooyin badana lagu gubay arintaas oo uu ku eedeeyay ciidammadda Liyuu Police ee dowlad degaanka Soomaalida Ethiopia oo iyagu degaaanadaas kula dagaalamay dad xoolo dhaqato ah .
“Dagaaladaas socday lixda maalmood waxaa ku dhintay ilaa 52 ruux oo 11 ay haween ahaayeen inta kalena rag, waxaa ku dhaawacantay afartan ruux, 18 tuulo ayaa la gubay, dad badan oo xoolo dhaqato ayaa barakacay”ayuu yiri Guddoomiye Cirfo oo intaa ku daray in dagaaladaas haatan la xaliyay
Guddoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa sheegay in arrintan ay xiriiro badan kala sameeyeen dowladda Ethiopia iyo saraakiisha ciidammada qeybta ka ah howl galka AMISOM, kadibna uu yimid is fahan. gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay in lagu balamay in shirar xal looga gaarayo dagaaladaas lagu kala qaban doono magaalooyinka Dhuusa mareeb iyo Jig jiga isla markaana ay rajo weyn ka qabaan in xalku ka soo bixi doono halkaa inta ka horeysana in aysan dagaalo kale dhicin laga shaqeyn doono.
War Deg Deg ah:Ciidamada Xoogga Dalka Oo la Wareegay Tooratooroow.